--Lọ - Akwụkwọ Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
Nkuzi akwukwo Facebook maka umu akwukwo Naijiria 2021/2022 Portal Update
Akara nkuzi nke Facebook maka ụmụ akwụkwọ Naijiria: Facebook bụ otu n'ime usoro ntanetị mgbasa ozi na-ewu ewu ebe ndị mmadụ na-ezute ndị ha maara / nwere ike ịchọ ịma. Agbanyeghị, na-abụghị ikpo okwu akparịta ụka, ọ bụkwa ikpo okwu iji kpọsaa azụmaahịa. Ọzọkwa, ọ bụkwa usoro ikpo okwu nke na-enye ụmụ akwụkwọ mmụta mmụta mmiri. Ọ na-ada ịtụnanya, nri? Ee nke […]
Ọmụmụ ihe iji na-amụ ná mba ọzọ maka ụmụ akwụkwọ Naijiria 2021 Ngwa Ndepụta
Nkuzi mmuta maka imuta mba ozo maka umu akwukwo Naijiria: Do ma na enwere uru elele ya ịbụ onye Naijiria? Na ụfọdụ n'ime uru ndị a gosipụtara agụmakwụkwọ dị ka agụmakwụkwọ iji mụọ mba ọzọ? I kwesiri ima ihe a. Ọzọkwa, a na-ahazi agụmakwụkwọ ndị a iji gboo mkpa ego nke ụmụ akwụkwọ Naijiria. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ndị a […]
Ebumnuche Nkuzi Nkuzi nke Ebumnuche Ebumnuche scholarships 2021 XNUMX
Ngwa Nkuzi Nzube: Tarlọ Ọrụ Na-ahụ Maka offerslọ Ọrụ na-enye ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ohere inye ụmụ akwụkwọ. Agbanyeghị, ụmụ akwụkwọ ga-enwerịrị iru eru. Tụkwasị na nke a, ndị mmekọ na ndị ọrụ ndị ọzọ nọ na Target iji mepụta ụgwọ ọrụ ego ọzọ. Yabụ, ụmụ akwụkwọ nwere ike ịnweta agụmakwụkwọ ndị a na ntanetị n'efu. Agbanyeghị, ịmatakwu gbasara agụmakwụkwọ a na ntozu ya […]
Nkuzi Nkuzi Microsoft 2021/2022 Nwelite Portal Ngwa
Nkuzi mmuta nke Microsoft: akwukwo akwukwo a bu akwukwo enyere iji nyere ndi nwere nkwaru aka aka. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere ụdị nkwarụ ọ bụla, ị kwesịrị iji ozi a kpọrọ ihe. Guo n’isiokwu a ka ịmụtakwu banyere nkuzi mmụta nkwarụ Microsoft a. Tụkwasa m obi, ị ga-enwe a youụrị na ị mere. Ebumnuche nke Scholarship Disability Microsoft […]
Enwekwu ego maka 2021 maka Studentsmụ Akwụkwọ Mba Formdị
Ndị ọkà mmụta ego a na-akwụ ụgwọ dị ukwuu: Dị ka nwa akwụkwọ mba ụwa enwere ọtụtụ agụmakwụkwọ ị nwere ike inweta. Agbanyeghị, ihe niile ị ga - eme bụ ime ihe achọrọ ma tinye. N’isiokwu a ị ga - enweta ozi gbasara ụfọdụ n’ime isiokwu ndị a. Ọzọkwa, ị ga-agụ maka otu esi enweta ha. N'ihi ya, ịbụ […]
Online MPH Sikolashị maka Mba Ndị Na-emepe Ihe 2021 Mpaghara Portal
Online MPH Sikolashị maka Mba Ndị Na-emepe Ihe: wish chọrọ irite ndị Ọkachamara Britain na Sayensị na Ọha Ahụike na Mahadum Suffolk site na UNICAF? Ọ bụrụ ee, ọ bụrụ na ị ga - agụ maka agụmakwụkwọ a. Ọzọkwa, agụmakwụkwọ a bụ inye enyemaka ego iji zubere nrọ gị. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị gaa na […]
Mahadum Harvard University Scholarships 2021/2022 Mmelite Portal Application
Mahadum Harvard University 2021: you bụ nwa akwụkwọ nwere olile anya ịmụ akwụkwọ na Harvard? Youchọrọ ka akwụkwọ gụọ akwụkwọ na Harvard? Ma ọ bụ, bụ Harvard ụlọ akwụkwọ nrọ gị ma ị gaghị akwụli ya? Enwere m ozi nwere ike ịmasị gị. Mahadum Harvard University maka 2021 ghere oghe. Isiokwu a na-enye gị […]
Ihe nkuzi nke ICCR maka ụmụ akwụkwọ Bangladesh 2021/2022 Portal Updates
Akara Scholarship nke ICCR maka ụmụ akwụkwọ Bangladesh: Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ maka ụmụ akwụkwọ Bangladesh. Enwere akwukwo akwukwo maka gi. Nke a nyere site n’aka Indian Council for Cultural Relations (ICCR). Jiri nlezianya gụọ ihe maka nkọwa zuru ezu. Studentsmụ akwụkwọ Bangladesh nwere ike itinye akwụkwọ maka ICCR Scholarships 2021. Isiokwu a na-enye gị ozi dị mkpa ịchọrọ ịma. […]
Apple WWDC Scholarship: Dị ka ụzọ isi nwee ekele maka ndị ahịa ya, Apple na-enye ụmụ akwụkwọ ọzụzụ. Ọzọkwa, akwukwo a bụ iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịma aka iji kwalite agụmakwụkwọ ha. Ọzọkwa, a na-elekwasị anya na iwulite ikike na mmepe ọrụ mmadụ. Ka o siri dị, ọ dị mkpa ka ị nwaa ya. Nweghị ihe ọ bụla [
Ọchịchị Commonwealth maka Studentsmụ akwụkwọ Naijiria 2021 Portal Ngwa
Ọchịchị Commonwealth maka Studentsmụ akwụkwọ Naijiria: Dị ka nwa akwụkwọ nke mba Commonwealth enwere ohere agụmakwụkwọ ị ga-erite na. Yabụ, dị ka nwa akwụkwọ Naijiria (mba Commonwealth), ị nwere ike irite uru na agụmakwụkwọ a. Agbanyeghị, agbanyeghị na enwere ihe ịchọrọ, edemede a na-enye gị ozi dị oke mkpa banyere otu esi etinye akwụkwọ maka ụfọdụ n'ime ha. […]
Port Haryana Sikolaship 2021/2022 haryana.gov.in
Dịka nwa akwụkwọ si na steeti Haryana, Haryana scholarships 2021 dịịrị gị. Ọ bụ ohere agụmakwụkwọ na-akwadoghị. Haryana Scholarship 2021 bu ezigbo ohere diri gi. Biko lee ihe ọmụma a dị mkpa anya. Haryana steeti enyela ọtụtụ agụmakwụkwọ. Ha na-ekpuchi nnọkọ agụmakwụkwọ 2021/2022. N'isiokwu a […]
Ihe kacha mma m chọrọ ịmụ ná mba ọzọ maka Scholarship 7/2021 Portal n'efu
Achọrọ m ịmụ mba ọzọ maka agụmakwụkwọ n'efu: yingmụ ihe na mba ọzọ bụ nrọ nke ọtụtụ ụmụ akwụkwọ. Agbanyeghị, ọnụ ahịa dị elu nke ụlọ akwụkwọ na-echekarị nrọ a. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịgwa gị na e nwere ụzọ? Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịgwa gị na a ka nwere olile anya ịmụ mba ofesi n'efu, ị ga-ekwenye? Kwe ka m…
Ihe Ngwuputa Ngwuputa 17 kacha mma zuru ezu 2021/2022 mmelite Portal
17 kacha mma ejiri ego zuru ezu na nkà mmụta sayensị: Mmụta na ozi ha na-ekwu bụ ike. Ọ bụ ezigbo ihe anyị ga-atụle n’isiokwu a. N'isiokwu a, enwere mpempe ozi dị oke mkpa gbasara ụfọdụ nkuzi injinia zuru ezu. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ mmụta agụmakwụkwọ ahọpụtara maka ụmụ akwụkwọ injinịa, biko gụọ. 17 Kacha mma […]
Ọmụmụ ihe na Germany Enyocha Ego zuru ezu: Na Germany, agụmakwụkwọ na-adị mfe. Enwere scholarships nke na-eme ka nke a kwe omume. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime agụmakwụkwọ ndị a na-eji nchịkọta dị ịtụnanya. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu gbasara agụmakwụkwọ ndị a, attentionaa ntị na ozi dị n'isiokwu a. N'isiokwu a, ị ga-amụta ebe / etu esi etinye […]
Scholarships nke dabere na SAT Score: Dị ka nwa akwụkwọ na-achọ inweta agụmakwụkwọ, biko gee ntị. Enwere scholarships ị nwere ike ịdabere na akara SAT gị. Iji kwuo okwu, agụmakwụkwọ ndị a chọrọ ka ị nwee akara SAT. Yabụ, ọ dị mkpa idobe akara SAT ahụ dị elu ma mara mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụkwu, […]
AKWARKWỌ & Ohere
Fenix ​​International Shortlisted Candidate 2021/2022 PDF Ndepụta Download
Fenix ​​International Shortlisted Candidates is 2021 is Out: Fenix ​​International Recruitment Shortlisted Candidates names wepụtara wepụtara. You tinyere akwụkwọ maka ngwa Fenix ​​International 2021 na peeji gọọmentị www.fenixintl.com? Mgbe ahụ ị na-ikekwe na-eche otú ị pụrụ ịlele Fenix ​​International Shortlisted nwa akwukwo 2021. Ghara iche ndị niile ọdịnaya nwere ike ịchọta […]
gbara akwụkwọ Job by Nhazi ederede TMLT na June 18, 2021
Tinye Ugbu a Maka UNDP Job na Abuja maka Mmemme Mmemme 2021
Tee Ugbu a Maka UNDP Job na Abuja 2021: Are na-achọ ọrụ na Naịjirịa 2021? Ga-achọ ịrụ ọrụ na UNDP? Ọzọkwa, ị gaghị eche ma ọ bụrụ na anyị eduzi gị otu ị ga - esi tinye akwụkwọ maka nyocha ọrụ UNDP na Nigeria na gafere? Ọ bụrụ ee, gaa n'ihu gụọ. United Nations Development Mmemme […]
gbara akwụkwọ Job by Ndị ọrụ Editorial na June 18, 2021	• 0 Comments
Ohere Ọrụ na PricewaterhouseCoopers (PWC) 2021 Mmelite
Ohere Ọrụ na PricewaterhouseCoopers (PWC): PricewaterhouseCooper na-anakọta ọtụtụ ọnọdụ ọrụ. Nwa akwukwo kwesiri inwe nzere bachelọ na oru ma obu ihe ndi ozo. PwC na-enyere nzukọ na ndị mmadụ aka ịmepụta uru ha na-achọ. Anyị na-na a na netwọk nke sịrị na 158 mba na ihe karịrị 180,000 ndị na-agba mbọ iji na-anapụta àgwà […]
PricewaterhouseCooper (PwC) Mbanye maka ndị gụsịrị akwụkwọ na-elekọta ndị nchịkwa 2021: PricewaterhouseCooper na-anata maka ndị enyemaka nchịkwa. Onye tozuru oke kwesiri inwe nzere bachelọ na Akaụntụ, Ego, Economics, Statistics, Iwu ma ọ bụ mpaghara metụtara ya. PwC na-enyere nzukọ na ndị mmadụ aka ịmepụta uru ha na-achọ. Anyị bụ ndị a na netwọk nke sịrị na 158 mba na ihe karịrị 180,000 ndị mmadụ […]
PricewaterhouseCooper Mbanye maka Onye Isi Nchịkwa 2021
PricewaterhouseCooper mbanye maka osote onye isi nchịkwa: PricewaterhouseCooper na-anakọta maka onye isi nchịkwa ndị isi. Onye tozuru oke ga-enwerịrị ahụmịhe opekempe nke afọ 5 na ụlọ ọrụ na-echekwa ego na ụlọ akụ. PricewaterhouseCooper (PwC) - Ndị ahịa anyị na ngalaba ụlọ akụ na-azụ ego na-achọ imeju ọrụ dị n'okpuru: Aha Job: Deputy Director Director Director Reference Number: 130-PEO00859 […]
gbara akwụkwọ Job by TMLTStaff na June 18, 2021	• 0 Comments
Tinye ugbu a maka ndị ọkachamara na Junior (Internal Firm Service) 2021: PricewaterhouseCooper na-anata ndị Junior Economists. Onye tozuru oke ga-enwerịrị opekempe nke nzere bachelọ na bekee, mgbakọ na mwepụ, sayensị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị ụlọ ọrụ PwC na-enyere ndị otu na ndị mmadụ aka ịmepụta uru ha na-achọ. Anyị bụ ndị a na netwọk nke sịrị na 158 […]
Tinye Ugbu a Maka Mbanye na-aga n'ihu na PricewaterhouseCooper (PwC) 2021: PricewaterhouseCooper na-anakọta maka ndị enyemaka nchịkwa. Nwa akwukwo kwesiri inwe nzere bachelọ na oru ma obu ihe ndi ozo. PricewaterhouseCooper (PwC) - Onye Ahịa anyị, ISO 9001: 2008 ụlọ ọrụ akwadoro nke na-enye ọrụ Nnyocha, Ọzụzụ na Ọrụ toweta na Oillọ Mmanụ na Gas, Marine and Industry. […]
Mmelite gbasara mmuta
MBA na Teknụzụ Teknụzụ 2021 Nkọwa, Syllabus na Ọrụ
Youchọrọ inweta MBA na Teknụzụ Ozi? Teknụzụ ihe ọmụma dị na isi nke ịkọwapụta ihe ọ pụtara ịrụ ọrụ, ịrụ ọrụ nke ọma, ịmị mkpụrụ, na ịnye ọrụ bara uru. Ọ na-akuziri ụmụakwụkwọ etu esi ahazi ọrụ ma jikwaa ndị otu sọftụwia. Gụọ ebe a maka ozi ndị ọzọ. An MBA […]
Ọ bụghị edemede niile pụtara ka ọ dị oke njọ ma na-amachibido iwu. N’oge ụfọdụ, edemede ga-atọ gị ụtọ ịgụ. A satire edemede bụ otu ihe atụ kachasị mma nke edemede edemede na-atọ ụtọ. N’isiokwu a, anyị ga - eduzi gị site n’ide ederede ịkpa ọchị zuru ezu; nakwa na-enye gị ụfọdụ ndị kasị mma satire [
Ederede nsogbu nsogbu bụ ụdị nkwenye na-ewu ewu. N'ime edemede ndị a, ị ga-akọwa otu nsogbu, mee ka onye na-agụ ya nwee mmasị maka nsogbu ahụ, tụpụta azịza ya, ma dịrị njikere ikposa nkwenye ọ bụla. Nke a na ọtụtụ ndị ọzọ dị ka usoro-site-zoo ndu, M ga-na ihe nke isiokwu a guputa gị. Ka […]
Ọrụ 30 kacha mma ịkwụ ụgwọ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na America 2021 Mmelite
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ọrụ kachasị ụgwọ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na America. Dabere na akụkọ na-adịbeghị anya site na Glassdoor.com, ndị dọkịta na ndị ọka iwu mpaghara mpaghara ka bụ ndị ọkacha mma na-enweta mba. N'iburu nke a, ọrụ na ọgwụ na iwu yiri ka ọ ga-aba uru karịa ego. Chọta nkọwa n'okpuru. Iji kpokọta ya ndepụta nke Best ingkwụ [gwọ [
gbara akwụkwọ Education by Ndị ọrụ Editorial na June 18, 2021	• 1 Comment
Edemede edemede Isiokwu 2021 Lee emelitere Comprehensive Ndepụta
N'isiokwu a ị ga-ahụ ihe atụ nke isiokwu edemede nyocha. Edere edemede a iji gosiputa ogo nke otu ihe. O nwere ike ịbụ ihe, ọrụ, ngwaahịa na ebe. Otú ọ dị, nanị ikwu uche mmadụ ezughị. A na-atụ anya ka onye edemede ahụ mee nyocha nke ọma banyere isiokwu ahụ. He / she is to…
Ọnụ nnabata nke Mahadum Richmond bụ otu ozi enyere maka mkpịsị aka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebanye aha na mmemme ọ bụla nke Mahadum Richmond. Ya mere, jiri okpukpe gụọ ihe dị na peeji a iji bulie onwe gị ozi zuru oke. Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Mahadum Richmond University nke ụmụ akwụkwọ Richmond nwere ike ịga na-acha ọcha […]
AKSKỌ CHlọ akwụkwọ ugbu a
Unilorin Remedial Portal: Nke a bụ iji gwa ndị agadi niile na ụmụ akwụkwọ na-aga n'ihu na ụzọ mbata na Mahadum Ilorin na-arụ ọrụ. Peeji a ga - enye gị echiche banyere ihe ị ga - atụ anya na ọnụ ụzọ. Ọzọkwa, ọ ga - eduzi gị otu esi enweta ọnụ ụzọ ahụ ma melite ya mgbe ndepụta nnabata […]
AAUA Portal Student: Ikike nke Mahadum Adekunle Ajasin enyerela nwa akwụkwọ ahụ aka. Ọnụ ụzọ a bụ ime ka ọrụ ụmụ akwụkwọ dịkwuo mfe. AAUA bụ gọọmentị steeti nwere ma na-arụ ọrụ na mahadum Naijiria. Agbanyeghị, gaa n'ihu na-agụ isiokwu a ka ịmatakwu. Na mbu, gini ka imara banyere mahadum Adekunle Ajasin (AAUA)? […]
OAU Portal Student Portal Nbanye www.eportal.oauife.edu.ng/login.php Mmelite kacha ọhụrụ
OAU Portal Student Portal Banye: Ikike nke OAU enyerela nwa akwụkwọ ahụ aka. Ọnụ ụzọ a na-enye ndị niile na-achọ ịmụrụ akwụkwọ ozi gbasara usoro nnabata ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, na Portal a, a ga-enye ụmụ akwụkwọ ọhụrụ na ụmụ akwụkwọ na-alọghachite ihe niile ha chọrọ iji mee ka ọmụmụ ihe ha dị mfe ma ka mma na ụlọ ọrụ ahụ. Obafemi Awolowo University (OAU) Obafemi […]
BIU Portal www.biu.edu.ng/ Lelee Mmelite Ngwa Ọhụrụ 2021
BIU Portal: ikike nke Mahadum Benson Idahosa enyerela ụmụ akwụkwọ aka. Yabụ, dị ka nwa akwụkwọ ma ọ bụ onye ị ga-amụrụ nke ụlọ akwụkwọ, ozi a kwesịrị ịmasị gị. Ọzọkwa, n'isiokwu a, ị ga-enweta ozi gbasara otu esi abanye na ọnụ ụzọ BIU. Mana nke mbụ, tupu ị banye n'ime ya, gịnị ka ị maara banyere […]
Portal Umu akwukwo FUNAAB www.unaab.edu.ng/ Lelee Portal Ngwa Kacha ọhụrụ
Portal ụmụ akwụkwọ FUNAAB: Ọ bụrụ na ị na-achọ njikọ gọọmentị iji banye na Portal University nke Agriculture Abeokuta, mgbe ahụ ị nọ n'aka nri. N'isiokwu a, ị ga-amụta maka ọnụ ụzọ ụmụ akwụkwọ FUNAAB. Na Portal ị nwere ike mepụta ihe omume dịka: ịlele dị ka nsonaazụ, kwụọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ, […]
OFFA Poly Portal www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Lelee Mmelite kacha ọhụrụ
OFFA Poly Portal: Dịka nwa akwụkwọ nke OFFA polytechnic, ozi a ga-amasị gị. Onwere uzo emere maka umu akwukwo nke OFFA Poly. N'ime ọdụ ụgbọ mmiri a, ọtụtụ ihe omume agụmakwụkwọ ga-eme nke ọma. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị gụọ site na isiokwu a ka ịmụtakwu banyere otu […]
AKWKWỌ AKW EDKWỌ
100+ Okwu ọchị ị nwere ike ọ gaghị ama ga-eme gị ọchị
Okwu ọchị na-atọ ụtọ ikwu. Mgbe ị na-eche banyere ya, okwu ụfọdụ n'asụsụ Bekee nwere ike ịmasị nke ọma. Na mgbe anyị na-ekwu "na-akpali" anyị pụtara n'ezie dị egwu na wacky. Ma hey, nke ahụ bụ ihe na-eme ha obi ụtọ, nri? Okwu Na-akpa ọchị Nke a bụ nchịkọta nke okwu ọchị na ihe ha pụtara. Dobe ha na […]
Etu aga-esi kpochapu oke na ulo nke oma ma zuru oke
N’ụzọ na-akpali mmasị, ihe ndị pere mpe na ntakịrị ntakịrị ihe na ndụ a nwere ike ịkpatara anyị ọtụtụ nsogbu na nsogbu. Ọ na-ada ụda wry na-eche na obere oge ntule dị ka oke nwere ike ịdọrọ nke ukwuu ma dọba uche na ọbụlagodi na-akpata oke ọgba aghara. Ọtụtụ ndị mmadụ jụrụ esi tufuo oke na […]
Nweta aha nna Noa
Ichoro aha nwa ohuru? Noa nwere ike ịhọrọ gị. Ka anyị lelee aha Noa Nzube, mmalite, na ewu ewu ma ọ bụrụ na ọ bụ aha kwesịrị nwa nwa gị. Aha ahụ bụ Noa bụ isi bụ aha nwoke pụtara Hibru. Ọ bụ n'ụzọ bụ isi […]
Portal Staff Portal www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Mmelite Kachasị ọhụrụ
BLW Portal Staff: you na-achọ ịbanye na Portal Staff Portal? Easiestzọ kachasị mfe ime nke ahụ bụ iji njikọ ndị ọrụ gọọmentị ga-enye n'okpuru. Anyị na-edobe njikọ niile oge niile. Ọzọkwa, ọ bụrụ n'ịchọrọ nbanye na Portal Staff Portal, mgbe ahụ enwere ụzọ dị mfe […]
18 Fun Fun Banyere M na Onye ọ bụla Ga-amasị Mara
Fun Fun About: Ọ bụrụ na ị ga - ede "ihe ọchị banyere m," gịnị ka ị ga-agụnye? Amaara m ihe ọ na-adị mgbe a gwara gị ka ị gwa ụfọdụ ihe ọchị banyere gị. Ọtụtụ oge ụfọdụ ị na-enwe mgbagwoju anya n'ihe ị nwere ike ikwu iji mee onwe gị ahịrịokwu. Na […]
Etu ị ga - esi setịpụ azụmaahịa ụgbọ njem na - aga nke na - eweta ezigbo uru
Businessgbọ njem: you chọrọ ịkpata ego ibufe mmadụ na ngwongwo site n'otu ebe ruo ebe ọzọ? Ọ bụrụ ee, edemede a ga - eduzi gị otu esi amalite azụmaahịa njem. Ibido azụmahịa njem chọrọ ka ikpebi ụdị azụmaahịa ịchọrọ ibido, nke gunyere mgbazinye igwe, ọrụ tagzi, […]
Nhazi nke Ndị Nkụzi: Mmụba nke teknụzụ mkpanaka akpalitela n'ezie nkuzi na nkuzi nkuzi a na-enwetụbeghị ụdị ya. Teknụzụ ndị a na-agagharị agagharị ebibiwo ókè, mepee ụzọ ndị ọhụrụ ha pụrụ isi mụta ihe, ma, nke kachasị mkpa, ha agbatịwo ohere mmụta iji tinye ohere dị ọcha. Site na nke a na-abịa inwe mgbanwe yana oke oke mmiri gbasara ike nwa oge na-eme mmụta. Dị ka a […]
Ndị agha ndị agha nke Nigeria bụ akara njiri mara nke ndị agha Naịjirịa ji eme ihe. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ọnọdụ ndị agha Nigeria niile dịka usoro ha si dị. Ndị agha mejupụtara ma ọ bụ kewaa ya n'akụkụ abụọ, ndị isi ọrụ na ndị ọrụ na-abụghị ndị ọrụ. Alaka ọrụ ọ bụla nke ndị agha Nigeria nwere akara ngosi metụtara ya nke ejiri mara ya. […]
gbara akwụkwọ Isiokwu by Ndị ọrụ Editorial na June 18, 2021	• 0 Comments